RetroArch: muchinjika-chikuva chaiwo mitambo emulator | Linux Vakapindwa muropa
RetroArch - Muchinjikwa-chikuva chaiwo mitambo emulator
Si iwe unofarira mitambo yechinyakare uye unoda kutamba paPC yako mimwe yemitambo iyi, iwe uri pamwe kufunga kweanopfuura mumwe emulator panguva imwe chete, Izvi zvinogona kuve dambudziko kubva kuti unakirwe neyako aunofarira echinyakare mazita iwe unofanirwa kumisikidza akati wandei emulators pane yako system.
Tatarisana nedambudziko iri, nhasi tiri kuzotaura nezveRetroArch chinova chikumbiro chikuru chandinoziva kuti chinokushandira. RetroArch chinongedzo chevamiririri, injini dzemitambo, uye vatambi venhau iyo yakagadzirirwa kukurumidza, kureruka, kutakurika, uye pasina kutsamira. Iyo ine epamberi maficha senge shader, netplay, uye zvimwe zvakawanda.
1 Nezve RetroArch
3 Nzira yekugadzirisa Key Mapping muRetroArch?
3.1 Maitiro ekubvisa RetroArch?
RetroArch ndeye yakavhurwa sosi software, modular system, yakawanda kumberi kune iyo libretro API. Libretro iri nyore, asi ine simba yekuvandudza interface inoita kuti zvive nyore kugadzira emulators, mitambo, uye multimedia zvinoshandiswa zvinogona kubatana zvakananga kune chero yakatsigirwa libretro kumberi.
Ichi chikonzero nei RetroArch inokutendera kuti umhanye mitambo yechinyakare pane akasiyana makomputa uye ekunyaradza kuburikidza neayo graphical interface. Iko kurongeka zvakare kwakabatana, saka kumisikidzwa kunoitwa kamwechete uye zvachose.
Pakati peanonyanya kuzivikanwa emulators aunowana muRetroArch yatinogona kuratidza zvinotevera:
Mavambo Plus GX
Iine mamwe akawanda, asi kungo taura zvakajairika, pasina zvimwe, zvinongosara kwauri kuti utore mukana pachirongwa chikuru ichi.
Zvino, RetroArch ine yepamutemo mapakeji ekugadzirisa kuiswa pane 64-bit kana armhf zvinyorwa zveUbuntu 16.04 uye zvichikwira, uye pane distros inotsigira iyo Snap fomati.
Kuisa iyo RetroArch arcade emulator paLinux isu tinotsigirana nekuisirwa kuburikidza neSnap, nokuti zvinodikanwa kuve nerutsigiro rweiyi tekinoroji yakaiswa pane yako system.
Kuisa mune yedu system, Isu tinongofanirwa kuvhura terminal uye nekuita unotevera kuraira:
Kana izvi zvangoitwa, isu tinongo enda kumenu yekushandisa uye tinotsvaga RetroArch kuti ikwanise kuimhanya pane yedu system.
Nzira yekugadzirisa Key Mapping muRetroArch?
Kugadzirisa iyo controller kana yekuita makiyi muRetroArch isu tinofanira kuenda kunzira inotevera, Zvirongwa> Input.
Watova mukati memenu isu tichawana dzakasiyana sarudzo dzekugona kumisikidza zvinodzora mukati meRetroArch, iwo mirairo yakatumidzwa Input Mushandisi Zvinosunga, uko imwe neimwe inowirirana nekumisikidza yakazvimiririra kune yega yega rairo.
Tine nzira mbiri dzekuzviita, kungava nemaoko kana nekumisikidza imwe neimwe mukati merondedzero nerubatsiro rweMushandisi 1 Sunga Zvese.
Mushandisi 1 Sunga Zvese zvazvichaita idiki nzira yekugovera mepu yemakiyi, iro zita rebhatani kana rairo rinoratidzwa pachiratidziri, isu tinongofanirwa kubaya bhatani pane kwedu kure kwatinoda kugovera iro basa.
Maitiro ekubvisa RetroArch?
Kana iwe uchida kubvisa ichi chishandiso kubva kune yako system, izvo zvaunofanirwa kuita kuvhura terminal uye ita unotevera kuraira:
sudo snap bvisa retroarch
Uye vakagadzirira nazvo, vatobvisa chishandiso ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » RetroArch - Muchinjikwa-chikuva chaiwo mitambo emulator
Iyo saturn core inoshanda zvinoshamisa, pese painondisiya ndichishanda ndinotamba maawa mashoma eredhiyo sirigun, mu archlinux inoshanda kwazvo uye iine basa rakanaka kwazvo